पौडेल पक्षमा साझा उम्मेद्वारकै सकस, पर्ख र हेरको रणनीतिमा देउवा - Naya Pageपौडेल पक्षमा साझा उम्मेद्वारकै सकस, पर्ख र हेरको रणनीतिमा देउवा - Naya Page
पौडेल पक्षमा साझा उम्मेद्वारकै सकस, पर्ख र हेरको रणनीतिमा देउवा
भृकुटीमण्डपमा ४० लाखको मञ्च, पाँच ठाउँमा पार्किङ, यसरी मिलाइँदैछ ट्राफिक व्यवस्थापन
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान साढे ११ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने छ । बैठकमा भोलि (शुक्रबार) देखि शुरु हुने पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको तयारीलगायत विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको बैठक आज पनि बस्दै छ । हिजो नेता प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सिबारीमा बसेको बैठकमा सभापतिको आकांक्षीबीच कुरा मिल्न नसक्दा सहमति हुन सकेको थिएन ।
आज बेलुकासम्म साझा उम्मेदवार चयन गर्ने यो समूहका नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला, पूर्वमहामन्त्री सिंह र नेता डा. शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी छन् ।
हिजो शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले अडान नछाडेपछि आपसमा सहमति गर्न नसकेको र आफूलाई पनि नेतृत्वमा स्वीकार नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीबाटै अलग हुने चेतावनी दिएका थिए । पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अंक गणितमा समेत बलियो बनेपछि यो समूहलाई देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवार बनाउन दबाब बढेको छ । देउवा भने संस्थापन बाहेक समूहबाट साझा उम्मेदवार तय हुने वा नहुने आधारमा आफ्नो टिम घोषणा गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
पाँच ठाउँमा पार्किङ, एक सिफ्टमा ३५० जनशक्ति परिचालन
महाधिवेशनका लागि काँग्रेसले संघीय राजधानी काठमाडौंको मुटु भृकुटीमण्डप रोजेको छ । जसका लागि मञ्च निर्माण तथा अन्य प्रचार प्रसारको तीव्र बनाएको छ ।
भृकुटीमण्डप लगायत आसपासका क्षेत्रमा काँग्रेसले पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा टाँगेर चुनावी माहोल बनाइरहेको छ भने महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माणमा पनि पार्टी पंक्ति जुटेको छ । बुधबार साँझ सम्ममा भृकुटीमण्डपको प्रमुख गेट महाधिवेशन केन्द्रीत प्रचार-प्रसारका ब्यानरले भरिभराउ छन् । संस्थापन र इतर दुवै पक्षमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार नटुङ्गिए पनि नेताहरूले आफूखुशी प्रचार सुरु गरेका छन् ।
अर्कातर्फ शुक्रबार हुने उद्घाटन सत्रका लागि करिब २५० देखि ३०० सय जना बस्न मिल्ने मञ्च तयार भइरहेको छ । जसका लागि काँग्रेसले ३५ देखि ४० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । मञ्च व्यवस्थापन तथा प्रचार-प्रसार विभाग संयोजक तथा काठमाडौं जिल्ला सचिव गोविन्द कम्पनीकाअनुसार बुधबार साँझसम्ममा मञ्च निर्माणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । मञ्च निमाणर्का लागि तीन दिनदेखि ४० जनाले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । मञ्च निमाणर्को काम निरन्तर भैरहेको निर्माणको ठेक्का पाएका रोशन जैशवालले जानकारी दिए । उनले कामको स्तर अनुमान गर्दा काँग्रेसले मञ्च निर्माणका लागि छुट्ट्याएको रकममा दोब्बर वा तेब्बर खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरे ।
नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुरु हुन अब एक दिन बाँकी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिसहित नेता कार्यकर्ता महाधिवेशन स्थल काठमाडौँ आउन शुरु गरेका छन् । २४-२७ मंसिरसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनको चिन्ता बढेको छ । बढ्दो सवारी चापले प्रभावित उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन देशभरबाट तीन लाखभन्दा बढी जनसहभागिता हुने भनिएको महाधिवेशनका कारण थप अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । यस्तोमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले व्यवस्थापनको योजना बनाएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थाका दुई मुख्य कुरामा एउटा जनशक्ति परिचालन र अर्को पार्किङस्थल हो । यी दुवै विषयमा ट्राफिक महाशाखा तयारीमा लागेको छ । महाधिवेशन स्थल वरिपरिको रुटमा प्रत्येक सिफ्टमा ३५० ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिने ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अस्त व्यस्त नहुने गरी मिलाएका छौं । आउने रुटमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं’, उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा जनशक्ति पनि बढाएका छौं । हामीले एक सिफ्टमा ३५० ट्राफिक प्रहरी यो महाधिवेशन वरिपरि खटिन्छन् । यो नर्मल अवस्था भन्दा बढी हो ।’
माइतीघर, भृकुटीमण्डप, रत्नपार्क क्षेत्रलाई फोकस गरेर जनशक्ति थप गरिएको हो । ‘योभन्दा अगाडि ठुला कार्यक्रम पनि व्यवस्थापन गरेको अनुभवका आधारमा व्यवस्थापनको योजना बनाएका छौं । नर्मल अवस्थाभन्दा अलिकति असहज होला । तर अस्तव्यस्त नै हुने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने ।
असहज अवस्था आए वैकल्पिक उपाय अपनाउने उनको भनाइ छ । ‘अरू सवारी चल्नै नसक्ने अवस्था हुँदैन । अरू गाडी पनि चल्छन् । हामीलाई अलिकति समस्या जुलुस निकालेको बेला हो । त्यस्तो बेला केही समयलाई डाइभर्ट गरेर मिलाउँछौ । वैकल्पिक बाटोबाट पठाउँछौं । त्यस्तो अस्तव्यस्त हुने अवस्था आउँदैन,’ एसएसपी भट्टराई भन्छन्, ‘इन्ट्री पोइन्ट हेरिन्छ । असहज अवस्था आए डाइभर्ट गरेर मिलाइन्छ ।’
दोस्रो महत्वपूर्ण विषय पार्किङ स्थल हो । देशभरबाट आएका कार्यकर्ताले प्रयोग गरेका सवारी महाधिवेशन स्थल नजिकै पार्किङ गराउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ । यसमा पनि ट्राफिक महाशाखाले सबैका लागि हुने गरी चारदेखि पाँच स्थान तोकेर पार्किङको व्यवस्था मिलाएको छ ।